umdwebi isiFulentshi, umlobi wezincwadi eziningana eziphathelene ubuciko yachtsman wayaziwa ubuntu ezihlukahlukene. Kakade phakathi nesikhathi sokuphila kwakhe, yilo muntu abe zakudala neyaziwayo kanye ummeleli oyinhloko neo-impressionism. Ngezimpawu namasevisi wakhe yena yanikezelwa Order of iButho Ukuhlonishwa. Futhi ngemva kokufa kwakhe eneminyaka engu-71, abantu besikhathi sakhe wathi ukuthi umdwebi abahlakaniphe wayeneminyaka emithathu umkhathizwe ozithandayo futhi engapheli - ubuciko, kolwandle futhi esintwini.
abaculi Progressive kwekhulu XIX, Sinyak Pol wazalelwa e-Paris e 1863 emndenini onothile. Ukhumbula ukuthi eseyingane kwakungenazinkinga futhi caressed ngempela uthando lwabazali.
Ngemva ekolishi, uPawulu uthi abazali bakhe abazange uhlose ukuya eyunivesithi, futhi efisa ukuqala iphupho yakhe - ukuba abe umdwebi. Abacwaningi bakwa-Signac bayaqiniseka ukuthi isifiso esinjalo nje isuke ibangelwa wokuzilibazisa kayise: ngesikhathi sakhe sokuphumula, wenza imidwebo kwenkundla, umfana, sengathi spellbound, ebuka ukuzalwa izithombe amateur. Futhi useduze Montmartre, okuyinto iyisonto art studios ithalente isiFulentshi, zashiya izibazi.
Abazali awuyiphikisanga isicelo indodana yakhe okuwukuphela kwayo ukuba creative. Sinyak Pol egxilile ngokuphelele e yobuciko wesimanje, ngokuvakashela zonke nemibukiso ubuciko ukuqala ukukopisha imisebenzi Impressionists abadumile. Kweza kuye i isenzakalo esingavamile lapho insizwa wakhumbula ngaphandle injabulo enkulu.
Lo mbukiso we Impressionists uPawulu, ukuthatha iphepha kanye amapensela, waqala Dweba ngokucophelela Umdwebo by Degas. Masinyane Uhlaselwe debutant embukisweni futhi kancane-eyaziwa Gauguin nge funa ukumisa ukukopisha. Le nsizwa kwakufanele umhlalaphansi sehlazweni.
Monet Admirer lokusungula
Kodwa ngo-1880, kwashona ubaba wakhe, ezashiya indodana kahle umbuso, kodwa engamangalelwa nangento eyodwa ukukhathazeka esithile ukufuna umsebenzi, futhi umatasa kuphela amakghonwabo.
Ayecabanga ukufunda, okwakuyoholela ukuthuthukisa amathalente akhe, ukuze lisuthe, Signac akazange ngisho bacabange ukungena School of Fine Arts, ngoba siqaphela ukuthi wayengeyona endleleni imfundiso esezingeni Umdwebo yendabuko. Yena ehamba ekhulekelwa imisebenzi Monet, ekuthandeni ukudluliswa yayo eMfuleni iSeine. Ngokusho wayeyisazi esizayo, njengoba nje Impressionism ungase ziveza ngokunembile ukunyakaza ezicashile yamanzi notshwala kanye an amazing game kwelanga kuso.
Paul uyaphupha lokuhlangana yomculi wakho oyintandokazi, ukufunda zonke izimfihlo yobuciko bakhe. Wabhala nencwadi nomdlandla ukuze umdwebi zihlaba ngesicelo ukusamukela. Kwabuthanelwa, kodwa Signac akazange asijabulele kakhulu nge yokwamukela abandayo ye-master, ababengakholelwa uphendule le mibuzo isithakazelo kuyo insizwa, wamthuma ukuba bathole ulwazi emisebenzini yabo futhi ephawula ukuthi azisetshenziswa ongabaqeqesha.
Pol Sinyak, ogama biography kuphawulwa ups zokudala kakade 1882 wabhala imidwebo yakhe yokuqala, ulingisa umbhali ozithandayo. Wayehlale abanesifiso ukudluliswa kokuhlukana zemvelo kule imidwebo we Impressionists, ngekhono esibonisa amanzi enyakaza amanzi futhi ukucabanga emfuleni. Ukuze udwebe kusukela ukuphila, Signac uthola encane ngomkhumbi isikebhe, okuyinto uhamba njalo nokwenza imidwebo. Nakuba ezemidlalo athandwa kakhulu kuba ngesikebhe, futhi abadwebi abaningi wamupha uhlobo inkokhiso lapho uthenga ukubhukuda izindawo ngobuhlakani bakho.
Omunye imisebenzi ebalulekile kakhulu umdwebi iba mdwebo "amatilosi Cross." Seascape lidlulisela umculi imicabango edabukisayo mayelana edabukisayo imidlalo womuntu izakhi bemvelo nezobakhumbuza Monet imidwebo.
Futhi Pointillism Neo
Pol Sinyak, laba izithombe zabo ezilotshwe ngokusebenzisa indawo imivimbo elihlanzekile imibala unmixed, isicelo pointillism amasu, lathathwa umngane wakhe - umculi J. Sulphur.
Ngo kokubukeza imidwebo yakhe ngelinye ezithile ehlweni lomuntu ubona umkhiqizo wonkana. Ngaphambi kokuthi uqale ukupenda ngendlela, uPawulu eside wafunda imfundiso yokuziphendukela imithetho ezibukwayo ukuqonda futhi umbala izixazululo.
Kulapho lapho kukhona khona umehluko phakathi imidwebo we Impressionists Signac, umbala lenhlanganisela emidwebweni yakhe enganakile, ukuqondiswa kuphela umuzwa wakhe. Painter ebhalwe phansi izimiso ohlangothini olusha in ubuciko incwadi, e anibizela indlela yaso neo-impressionism. Wayelokhu idayari, eyayibhalwe zonke izizwe sigcina play umbala nokukhanya.
Le nqubo kwenza kube nokwenzeka ukudala yobuciko landscape imidwebo kweqiniso, kodwa kahle kahle ukuba lo mfanekiso uhlobo.
Kwangezikhathi ehlanganisa smear
"Isigodlo Zopapa e Avignon", abhalwe 1890, kuyinto ubonisa okungcono brushwork Signac. smear Tiny kungukuthi yayihlangana ncamashi iwe imibala, ongaboni ukudala isithombe esiphelele esigodlweni eFrance. Ukuze kwesokunxele yakhe, umdwebi okubonisa kwebhuloho adalwe shades kapende oluhlaza. Eduze umdwebi owenza brushstrokes umbala ezahlukene, ngaphandle ukuxuba ndawonye.
Futhi uma isithombe ibukeka eduze njengoba ehlanganisa ezincane izilongotshane ngendwangu ke at ibanga imivimbo uhlangane ukwakha ubuqotho umkhiqizo. Ubani oye wafunda imfundiso yokuziphendukela imiphumela optical Signac wakucabangela okwatholakala ekuqaliseni Impressionists in umdwebo, sikhumbula ukuthi uma ukushintsha ukukhanyisa umbala ushintsho iphethini.
Ugqozi landscape laseSaint-Tropez
Kusukela 1892, umdwebi Pol Sinyak uthola ubuhle bemvelo French iMedithera. Uya eningizimu yezwe edolobheni laseSaint-Tropez, umxhwele kakhulu kangangokuba master ibhulashi enquma ukuhlala lapha. Ngo-eyakha indlu, ogama amafasitela ukunikela sezwe umlingo phezu olwandle, inkosi inike ikamelo ukusebenza. Nangu ukuhanjelwa yileli ugqozi umculi kudala kokuqendwa emifanekiso imidwebo, waqaphela njengesinye yemisebenzi yakhe emihle kakhulu. Kukholakala ukuthi okwembulwa ngokugcwele ithalente lakhe Neo-Impressionists.
Wayevame libhekisela isihloko izihlahla, emelela namandla emvelo on ngendwangu. On the ngendwangu "Pine e Saint Tropez" elikhulu nesalukazi esimxhiliba ukhuni subjugates landscape, kanye eguquguqukayo kanye ukunyakaza idluliselwa amagatsha ahlukahlukene imivimbo isitayela. Umdwebi, ogama isitayela obhalwe ngayo ifana wamatshana kuyinkimbinkimbi ukuthungwa olungokomfanekiso nemibala kokushintsha, badonswa, baphuma iyashintsha iyaphupha ibe shades ukuze kokuqhathanisa elikhanyayo.
Sebenza studio kunokuba ngemvelo
Umfundi umdwebi omkhulu yachazwa njengetshe elincane studio zokusebenza master: "Kusukela efasiteleni lendlu yakhe ngeke aphunyuke yimuphi omunye kwenzekani umcimbi Sea. Esikhathini workshop yelanga ethela ngembobo enkulu, okwenza izinto emhlabeni izindawo elikhanyayo. "
Painter Neo-Impressionists ayisekho usebenza njengasekuqaleni, endaweni evulekile. It nje kudala uhlaka, imidwebo, wasinikeza ukubukeka osuphelile eshabhu lakhe.
A umculi abanamakhono ngubani utlole wezincwadi eziningana eziphathelene nale umlando imidwebo, babé izincwadi yabaculi eziningi, popularizing uhlobo ngisho wathola isidlaliso "St Paul."
Sinyak Pol iqhaza emncintiswaneni futhi ngokuvamile iwina ithanda ngomkhumbi uhlanga. Ehamba eziningi, futhi ngamunye idolobha yobuciko lapho entsha. Kusukela ngeso elibukhali umdwebi akusho ukubaleka noma nini - kulula ukuba adlulisele ukukhanya umdlalo ukukhanya kwelanga phezu kwamanzi, zingavuvukalanga ngu ipheshulwa lomkhumbi umoya useyili yezikebhe bobbing phezu olwandle. Waze athumba uhlanga phezu ifilimu "Regatta e Concarneau" idlula ukunyakaza sailboats, ukushesha lapho amanzi.
yobuciko egcwele Khanyisa-
Signac imidwebo ngokoqobo egcwele ukukhanya. Lusizi ekuqaleni kweMpi Yezwe Yokuqala kanye Russian Revolution, umculi akakubekezeleli kokuphazamisa imicabango yakhe imidwebo yakhe, kungekho ingaphazamisi umkhiqizo obunobunye lapho imvelo nabantu ukuphila ngokuvumelana ngokuphelele. With ukuthuthukiswa imboni kukhona Motifs ezimbonini namathafa akhe.
Ukuhlolwa in umdwebo
Ukusebenza uhlobo Neo-Impressionism Sinyak Pol ngomdlandla wahlanganyela kanye ihluzo. Kuye kulesi sici kwaba umbono lapho umugqa ovundlile, ngokuvumelana umculi, ukudlulisa umuzwa ukuthula, ukwehla phansi ukudabuka wakhomba futhi wabonisa injabulo liphuma.
Waqaphela njengoba ubuhlakani wasebenza ngamafutha watercolors, lithographs futhi etchings wadala ngosizo inki amachashazi sketching imidwebo esizayo. Ekhangwa inqubo yamatshe eByzantium, wasuka imivimbo ezincane fafaza on ngendwangu tikwele letincane tente isithombe ngalokulingene.
Eminyakeni engaba ngu-amathathu, uPawulu owaba ngumongameli wase "Society of Independent Abaculi", ukusekela kakhulu neziphiwo abasha. WayeyiZwi ugqozi futhi isibonelo Matisse futhi baba umthengi yakhe ngaphambi kwemisebenzi yamandulo.
Hermitage. Signac imidwebo
Ibhalwe ngemuva kohambo oluya Marseille ngo-1907, lo mdwebo, wabulawelwa inqubo pointillism, elise uMbuso Hermitage Museum Petersburg. "Isikhumulo semikhumbi e-eMarseilles" Ufake Russian Museum e namathathu banesifo esibi kwekhulu elidlule. Ngaphambi kwalokho, wayeshaye phansi eqoqweni edumile UMuphi I. A. tvoix rukax, wathenga up eYurophu yobuciko eliyingqayizivele.
Hermitage Foundation ngo-1931 kwavela umbhalo Signac ngokuthi athi "iNkantolo".
Ngo-2012, uveza isipho edition esiyingqayizivele eyayinesihloko esithi "Uhambo" Hermitage. Imidwebo ngu abadumile abaculi, kuhlanganise Signac, ephelezelwa izincazelo bese ukhuluma ngemvelaphi marina uhlobo.
Qeda indaba umdwebi odumile ufuna amazwi akhe, lapho uzichaza: "Mina baye badela ngokwabo ngenxa yobuciko, bese kuphela ungakwazi uthethise mina. Mina ngangisebenza kusukela ekuseni kuze kube sebusuku, benakekela udumo nengcebo. Manje wazi konke ukuphila kwami. "
Udweba kanjani dragon: kudalwa izidalwa wasenganekwaneni esiyingqayizivele
Master class "Udweba kanjani a inhloli": ezimbili ongakhetha
Imiklamo elula amahle ngomdwebo
Uhlobo Historical ku zobuciko: incazelo, abameleli
Indlela abilayo pacifiers? Imiyalelo nezindlela
Epidermal simila (atheroma): izimbangela, ukwelashwa, izithombe
Kuyini FTPS: isimiso ukusebenza futhi umehluko kusukela FTP evamile
I endlini eqashisayo eyayiqhele "Niko" e Vityazevo: incazelo, amanani, ukubuyekezwa
Umhlaba-Animal Protection Day. Lapho futhi kanjani ukugubha? Imicimbi Animal Protection Day
Hambisa H3 okusha. IsiShayina SUV entsha. Hambisa H3 okusha - Izibuyekezo